कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट आत्तिनु पर्नेछैन : डा. शेरबहादुर पुन Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
काठमाडौँ : कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण भारतमा पुष्टि भएसँगै सरकारले जोखिम भएका देशबाट नेपाल आउने यात्रुलाई अन अराइभल भिसा नदिने निर्णय गरेको छ।
दक्षिण अफ्रिका, हङकङ लगायतका ९ देशबाट नेपाल आउने यात्रुलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। हाल नेपाल आउँदै गरेका अनिवार्य क्वारेनटिनमा बस्नु पर्नेछ।
डाक्टर शेरबहादुर पुन भन्छन् :
छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको नयाँ ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्ट देखिएसँगै नेपालमा तरङ्ग उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। सङ्क्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन।
अहिलेसम्म ओमिक्रोन भेरियन्ट डरलाग्दो छ भन्ने पनि पुष्टि भइसकेको अवस्था छैन। नयाँ भेरियन्ट छिटो फैलने गति देखिएको छ। तर, यो कति घातक छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन।
हामीले विगतमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाको समस्या बेहोरेका हुनाले आत्तिनु हुँदैन। सतर्कता भने अपनाउनुपर्छ।
भारतमा सङ्क्रमण देखिँदा हामीलाई अलि अप्ठेरो चाहिँ हुन्छ। खुला सिमानाका कारण नेपाल–भारत आवतजावत सहजै हुन्छ। जसले गर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित व्यक्ति आवतजावत गर्ने सम्भावना हुन्छ। यो समस्या विगतमा पनि देखिएकै हो।
खुला सिमानाका कारण भारतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ ओमिक्रोन भेरियन्ट पनि नेपालमा सहजै प्रवेश गर्न सक्छ। त्यसलाई रोक्न निक्कै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। त्यसैले नेपाल–भारत सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिन्छ। जसले धेरै हदसम्म भाइरस नेपाल प्रवेश गर्नबाट रोक्न सकिन्छ।
यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा हाम्रो तर्फबाट सतर्कता अपनाउनुपर्‍यो। हाम्रो तर्फबाट भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ।
हामीले कोरोना भाइरसको दुई वटा लहरको पनि अनुभव बेहोरेकाले यस अघिका कमी कमजोरी पत्ता लगाएर समीक्षा गर्दै सतर्कता अपनाउनुपर्छ।